"Aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an’i Jesosy." Hebreo 12:1, 2
"Izaho (Jesosy) … ny Kintana mamirapiratra fitarikandro." Apokalypsy 22:16
« Fony tanora aho, dia nankafy fatratra ny mitondra sambo lay. Mbola tsaroako hatrany ireny alina teny ampovoan’ny ranomasina ireny, nanamory sambo lay atopatopan’ny rivotra sy ny alon-drano… Tsy ela dia haiko fa zava-dehibe ny mihazona ny sori-dalana, rehefa mamakivaky ranomasina. Raha mibanjina loatra ny tondroavaratra ny maso, dia sarotra ihany izany, fa raha kintana iray eny amin’ny faravodilanitra kosa no kendrena, na ny onja lehibe indrindra aza dia tsy hampivily lalana.
Eo amin’ny fiainantsika andavanandro, mba tsy hahavery lalana, dia Jesosy no kintana kendrena. Izy no kintan’ny maraina. Isika rehetra dia mifanehatra amina onja mety hanosika antsika ho amina lalan-diso; matetika ny fiainantsika dia feno fanahiana, fitsapana, fahoriana. Ny loza mitatao dia hoe tsy tsapantsika akory fa miha tsy hitantsika tsikelikely ilay kintan’ny maraina. Dia azon’ny hakiviana isika ary voahozongozon’ny zava-tsarotra eo amin’ny fiainana. » (Michel V.)
“Fa niteny Izy ka nanangana rivotra mahery, izay nampisondrotra ny onjan-drano; niakatra hatramin’ny lanitra ny olona, ary nidina hatramin’ny lalina; ny fanahiny levona noho ny fahoriana…
Dia nitaraina tamin’i Jehovah ireo, raha ory, ka nampiala azy tamin’ny fahatereny Izy. Nanony ny rivotra mahery Izy, ka nitsahatra ny onjan-drano. Dia faly ireo, satria nitsahatra izany; ary nentiny ho amin’ny fitodiana niriny izy.
Aoka hidera an’i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin’ny zanak’olombelona !” (Salamo 107:25-26, 28-31).